Ahoana ny fampitomboana ny tombom-barotra amin'ny rindrambaiko maimaim-poana | Avy amin'ny Linux
Mampiasa rindrambaiko maimaimpoana isan'andro aho, mino ny mety ho izy ary ambonin'izany rehetra izany dia mieritreritra aho fa rafitra fampidirana marobe izay tsy voafehy ny fidirana amin'ny fampahalalana, izay mahatonga ny fandraisan'anjaran'ny fiaraha-monina mampitombo antsika haingana ary na inona na inona fahaizantsika azontsika atao manampy mamorona zavatra tsara kokoa.
Nanomboka tamin'ny karazana andian-dahatsoratra Ahoana ny fampitomboana ny orinasantsika amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, ao no nanambara fa ny tena tanjon'ny orinasa dia mampitombo tombony, mamorona marika, tazomy ireo mpanjifantsika ary mampihena ny fandaniana na fatiantoka, ny tanjonay dia ny manohy manome fahalalana mba hahatratrarana ireo tanjona ireo amin'ny fomba hafainganina amin'ny SME sy orinasa lehibe.
Betsaka amin'ireo orinasa no mino fa ny fampitomboana ny volan'ny varotra ihany no fomba tokana hampitomboana ny tombom-barotra, na dia tena marina aza fa ny loharanom-bola betsaka amin'ny fampitomboana ny fidiram-bola vaovao dia ny varotra betsaka kokoa, tsy voatery hisy fiatraikany ambony izany, noho ny firafitry ny vidiny. amin'ny tranga maro dia tsy tsara izany na mihena ny fepetra sy ny fahaiza-manao amin'ny famokarana satria mihabe ny famokarana. Na inona na inona tranga misy, dia resy lahatra izahay fa ny fampitomboana ny tombom-barotra dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fahaizanay mivarotra, ny fahaizan'ny lozisialy ary ny tanjakay hanakanana ny mpanjifa farany tsy hamerina ny vokatra, izay mazava ho azy fa mifandraika amin'ny fihenan'ny fanohanana. , fanaraha-maso aorian'ny fivarotana na hanatsarana fotsiny ny fampiasana loharano.
Hetsika hampitomboana ny tombom-barotra
Ny fomba hampitomboana ny tombom-barotra dia mifototra indrindra amin'ny fikarohana ny fotoana mety hampihenana ny fandaniana mifandraika amin'ny famokarana, ny varotra ary ny fizarana ny vokatra, izay tsy maintsy ampiana fanaraha-maso tsara ny kalitaon'ny vokatra sy paikady mifanaraka amin'izany. fanovana fivarotana vaovao miaraka amin'ny fifampiraharahana izay ahazoana tombony kokoa ny sisiny.
Ny rindrambaiko maimaimpoana dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fomba hampitomboana ny tombom-barotra satria manana fitaovana mamela ny fanamafisana ny fifehezana ny fanamboarana, ny marketing ary ny fizarana ny vokatra izy, amin'ny fomba mitovy amin'izany, misy rindrambaiko maimaimpoana be dia be izay natao ho an'ny varotra. ary ny fifehezana ny varotra izay misy fiatraikany amin'ny fitomboan'ny fiovam-po, toy izany koa noho ny karazan-fitaovana entina hitantanana ny mpanjifa sy ny mpiasa afaka manatsara ny serivisinay.
Ny fifangaroana marina amin'ireo fitaovana rehetra ireo dia mitarika antsika hanana fahombiazana ara-teknolojia izay mety hahatonga antsika ho mpifaninana tsaratsara kokoa, hanome antsika ny vidin'ny famokarana tsara kokoa ary hanome ny mpanjifanay fomba mora kokoa hahazoana ny vokatra misy antoka manome fahafaham-po tsaratsara kokoa.
Ny fomba tsotra indrindra hampiakarana tombony amin'ny alàlan'ny rindrambaiko maimaimpoana dia amin'ny alàlan'ny famaritana ireo fitaovana ahafahana manatsara ny fomba voalaza etsy ambony, amin'ny ankapobeny ireo fitaovana izay fantatray fa afaka manampy anao amin'ity asa manan-danja ity dia:
CRM isan-karazany izay nohazavaina tamin'ny antsipiriany tao amin'ilay lahatsoratra fitaovana CRM loharano misokatra 6 ambony.
ERP loharano misokatra izay mamela ny fitantanana ny fizotry ny famokarana orinasa, izay amin'ny fampiharana azy tsara dia afaka manampy amin'ny fitehirizana ny vidiny sy manara-penitra ny fomba famokarana, izay misy koa maody maivana crm sy aorian'ny fivarotana. Anisan'izy ireo no azontsika tononina faktioraScript, Odoo, Idempiere, Adempiere, LibertyaERP, webERP, ERPNext, MixERP ankoatra ny hafa.
Fitaovana tena tsara E-commerce como el Magento, PrestaShop, osCommerce, OpenCart, Spree Commerce ankoatry ny hafa dia mamela antsika hisarika mpanjifa vaovao sy hanao varotra amin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny fandaniana ambany.
Fitantanana atiny, antontan'isa ary fitaovana fampitaovana toy ny WordPress, matoatoa, mephisto, seo tontonana, socioboard, piwik, mautic, lahateny, sns.
Na inona na inona fitaovana ampiasaina, ny zava-dehibe dia ny fahafantarana fa ny fahaizana miteraka tombom-barotra amin'ny orinasa dia mifamatotra amin'ny fitantanana ny fizotrany, ny kalitaon'ny vokatra ary ny fanatsarana ny fomba famokarana vokatra tsara kalitao miaraka amin'ny fanjifana ambany. ny loharanon-karena.
Amin'ny tranga manokana, matetika aho dia mampiasa fitaovana toy ny ERP Odoo izay manampy ahy manatsara sy manara-penitra ny fizotran'ny mpanjifako, ity amin'ny voalohany dia manome ahy fifehezana ny fandaniana sy ny vola miditra amin'ny orinasa iray, mamantatra ny tsy fahombiazan'ny fandaminana sy ny fomba fiasan'ny orinasa. fandaminana ary mamela ahy haka sary an-tsaina ireo fotoana mety hivoarana. Mifantoka indrindra amin'ny fanatsarana ny fizotry ny famokarana ny orinasa aho (ny maodely famokarana Odoo dia manampy ahy betsaka amin'ity asa ity), avy eo dia mifantoka amin'ny fanaovana lozisialy ho fomba iray hanampiana tombam-bidy fanampiny amin'ny vokatra aho ary tsy hitohizan'ny fiheverana azy ho fandaniana amin'ny rojom-panolorana, farany fa tsy ny kely indrindra dia mamorona politika ampy hanatsarana ny fantsom-barotra izahay ary mba hahomby kokoa ny fividianana fidirana.
Izany rehetra izany dia tsy asa tokony harahina amin'ny taratasy, fa porofo efa voaporofo kosa fa ny fanatsarana ny fizotran-tsika anatiny na inona na inona volantsika dia hitahiry vola bebe kokoa ho an'ny fikambanantsika, izay mifanaraka mivantana amin'ny famoronana tombony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fampitomboana ny tombom-barotra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana
Ahoana ny fomba hiarovana ny solosainanao amin'ny fanafihana